Si loo horumariyo oo u koraan ah bakhaaraynta iyo adeegyada SKA, waxaan u furay laba xafiis laan at Tianjin 2004 iyo Guangdong ee 2006. Waxaan la qorsheeyay iyo bilaabay buugga design cusub ee sanad walba la Wadaage VIP our tan iyo 2013.
awoodda wax soo saarka Our 100 weelasha bishiiba. Haddaba waxaan ku adkayn sumcad weyn oo sharaf u dhexeeya boqolaal hawlgalayaasha ganacsiga caalamiga ah ee wax soo saarka alaabta guriga.
TXJ waa meel cajiib ah in ay ka shaqeeyaan iyo ma aha oo kaliya sababtoo ah ee gargaarka in aan diiradda lagu saaray. It`s sababtoo ah kooxda, dadka ka yimid meelo kala duwan halkan ururin. Waxaan qoyska weyn daryeelka midba midka kale, ka shaqeeya oo hore u socda in ay ka mid riyo.
TXJ waa in ganacsiga alaabta guriga leh in ka badan 20 sano oo joogto ah ka go'an in ay la dhageysto iyo baahiyahaaga macaamiisha, sahaminta shuruud qoto dheer oo suuqa iyo helitaanka a guul-guul. Waxaanu higsanaynaa in aanu alaab ururso gurigaaga si fiican oo raaxo leh!
"Tayada ugu horeysay, macaamiisha wayn" waa mabda'a sheegaya in TXJ had iyo jeer ku adkeystay in on.